Fametrahana mora ny rindranasa avy any Google, Play Store. | Androidsis
Amin'ny lahatsoratra manaraka o tutorial azo ampiharina, Tiako haseho anao ny fomba fametrahana ny fampiharana Google teratany ho an'ny Android toy Gmail, Hangouts o Play Store raha tsy mila mampiasa zip mateza ianao avy amin'ny fanamboarana novaina.
Noho izany dia hampiasa an'io izahay fampiharana telo amin'ny endrika apk, (mila misintona ny iray na ny iray hafa arakaraka ny kinova Android anananao), izay azontsika apetraka tahaka ny misy azy apk ao amin'ny Android misy antsika manana alalana mamela hametraka fotsiny fampiharana avy amin'ny loharano tsy fantatra.
Voalohany aloha tiako horesahina ny loharanom-baovao tany am-boalohany izay tonga, toy ny saika matetika amin'ireo tranga ireo! Forum momba ny fikarohana sy fampandrosoana XDA Android.
Ahoana no hametrahako ny Google Gapps na ny rindran-damina Google zanako ao amin'ny terminal Android misy ahy nefa tsy ilaina ny fanarenana voaova?
Ny valin'io dia tsotra fotsiny Sithu Htun, mpampiasa forum an'ny XDA Developers.
Ny zavatra voalohany tokony holazaiko aminao fa io fika na fampianarana io dia mety amin'ny kinova Android 4.0 na ambony kokoa irery sy manokana, ho fanampin'ny filàna manana terminal izay efa teo aloha miorim-paka ary manana safidy alalana Mpampiasa super.
Raha mahafeno ireo fepetra ireo isika dia afaka mankany amin'ny apk misintona mifanaraka amin'ny kinova Android ankehitriny:
Ho an'ny kinova an'ny Android 4.0 ka hatramin'ny 4.0.4 tsy maintsy ampidinintsika ity apk ity.
Ho an'ny kinova rehetra an'ny Android 4.1 tsy maintsy ampidinintsika ity apk ity.
Ho an'ny kinova an'ny Android 4.2, 4.3 na 4.4 tsy maintsy ampidinintsika ity apk ity.
Raha vantany vao voasintona ny apk mifandraika amin'ny kinova Android misy antsika ankehitriny, dia mankany amin'ny làlan'ny fampidinana izahay manatanteraka izahay amin'ny fipihana eo aminy. Hiseho ny efijery fametrahana fampiharana izay tokony hamelantsika ny fametrahana.
Vantany vao tafapetraka isika dia manatanteraka azy amin'ny alàlan'ny fikarohana ny fampiharana ao anaty vatasarihana fampiharana an'ny Android ary hahazo efijery toa ity manaraka ity izay ahafahantsika misafidy eo anelanelan'ny hametraka fampiharana Google zanatany na, raha tsy mahomby izany, esory izy ireo. Lojika hifidy ny safidy voalohany dia ny instalar ireo rindranasa voalaza etsy ambony an'ny Google.
Miandry ny famaranana ny fizotran'ny fampiharana izahay ary hiroso amin'ny fametrahana azy ireo. Raha vantany vao vita ny zava-drehetra dia hanana ilay fivarotana fampiharana notadiavina ho an'ny Android isika Play Store avy amin'izay azontsika atao mankafy ny atiny misy rehetra na dia ny fananana terminal izay amin'ny ankapobeny aza tsy mahazo alalana hampiasana azy.
Mba hamaranana ny filazako izany Izaho manokana dia tsy afaka nanandrana ity fizotrany ity fametrahana ny Gapps, na dia avy amin'ny loharano tonga aza dia tsy nanana fisalasalana tamin'ny famoahana ny lahatsoratra aho.
Fanazavana fanampiny - Tutorial-video: Dingana voalohany miaraka amin'i Airdroid
Sintomy - Ho an'ny kinova an'ny Android 4.0 ka hatramin'ny 4.0.4 Tsy maintsy ampidinintsika ity apk ity., Ho an'ny kinova rehetra an'ny Android 4.1 Tsy maintsy ampidinintsika ity apk ity., Ho an'ny kinova amin'ny Android 4.2, 4.3 na 4.4 tsy maintsy ampidinintsika ity apk ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fametrahana ny rindranasa Google zanatany raha tsy mila fanovana voaova
Tsy azoko hoe maninona no be pitsiny raha toa ka misy ao amin'ny magazay amoron-dranomasina ireto fampiharana Google ireto ary avy eo izy ireo dia azo apetraka
rachell dia hoy izy:
nesorina i wasap
Mamaly an'i rachell
Sajaro dia hoy izy:
Idiot, Google Play dia tafiditra ao amin'ireo GApps, nampakatra an'ity lesona ity izy hahafahany mametraka azy ireo satria ny ROM na ny rindrambaiko ofisialy Softwares TSY MISY APPLICATIONS IREO (ANTITRAN'ILAY GOOGLE PLAY). Aza manome hevitra raha tsy fantatrao izay resahina eto.
Mamaly an'i Sajaro
juan sempere gonzalez dia hoy izy:
ho an'ny 4.4 dia milaza amiko izy fa tsy maintsy manana 4.2 aho vao afaka mametraka azy ireo
Mamaly an'i juan sempere gonzalez
ry Vargas dia hoy izy:
Manana LG G pro Lite aho izay very tsy nahy ilay magazay kilalao ary hitako tamin'ny pejy hafa fa niresaka momba ny fametahana zip'ny GApps izy ireo tamin'ny finday saingy tsy vitako izany, mandra-pahitako ity hafatrao ity , Misaotra Rahalahy nanampy betsaka ahy izy
Mamaly an'i yigo Vargas
Fernando Woodbery dia hoy izy:
Tena ankasitrahako ny fanampianao lehibe, satria tsy nahy nesoriko ny play store ary nampihatra an'ity gapps ity dia naveriko tamin'ny findainy ny findaiko ary niverina tany amin'ny menio fivarotana aho. Misaotra an-tapitrisany indray ,,
Valiny tamin'i Fernando Woodbery
Goic Hamlet dia hoy izy:
Mila fanampiana aho, manana galaxy s3 hametraka philz touch 6 fanarenana mandroso aho, avy eo apetraho ny ROM lollipop 5.0.2 vaovao ho an'ny sy ny kernel ary ny zip ny gapps ... ny zava-drehetra dia miampy ny gapps ... ahoana no hametrahako azy raha tsy mampiasa recovey?
Mamaly an'i Hamlet goico
Phodeikos Drakk dia hoy izy:
Salama! Tena ankasitrahako ny fandanianao fotoana hanampiana ny hafa amin'ity anjara birikinao ity. Tena nanampy ahy izany. Misaotra! 😀
Valiny tamin'i Phodeikos Drakk
Paco Mendez dia hoy izy:
uffff, misaotra betsaka tompondaka, misaotra ny fandraisanao anjara dia namaha aretin'andoha be aho, manam-pahaizana ary misaotra betsaka indray
Valiny tamin'i Paco Mendez
Lina galeano dia hoy izy:
Fandraisana anjara lehibe, misaotra betsaka.
Nanampy ahy hamaha ny olana amin'ny serivisy filalaovana izany fa tsy amin'ny fivarotana.
Misy mahalala ny famahana farany ny lesoka: »nijanona ny fampiharana ny fivarotana«?
Efa nanandrana ny zava-drehetra aho ary tsy mandeha.
Valiny tamin'i Lina Galeano
Hernán Medellin dia hoy izy:
Valiny tamin'i Hernán Medellín
SwagVader dia hoy izy:
Mamaly an'i SwagVader
henman dia hoy izy:
Omeko ny kinova 4.1 ary hitondra ahy any amin'ny pejy sinoa iray izany? Inona no ataonao
Mamaly an'i henman
Jpsjoey dia hoy izy:
Manana s2 miaraka amin'ny cm13 aho ary mila mametraka ireo gapp raha tsy misy fanarenana dia mila fanampiana x_x aho
Mamaly an'i Jpsjoey
Manana hadisoana fakan-tsary aho amin'ny 4.4.4 amin'ny droid ultra verizon mila fantatro raha azo atao ny mametraka ny fakantsary gapps d fotsiny ary mamerina ny flashee, esory ny fakantsary avy amin'ny orinasa ary tsy misy azafady.
Mamaly an'i mikel
Azafady, azonao omena ahy ve ilay rohy ho an'ny 4.1
LoL agar dia hoy izy:
Tsy haiko hoe aiza ireo rohy, raha afaka mampahafantatra ahy ianao dia tiako izany
Valiny amin'i Agar LoL